China otomatiki SMC Kugadzira Line SMC muchina jira kuumbwa kemikari Kugadzira uye Fekitori | Zhengxi
Yakazara otomatiki Resin Kusanganisa Zvimiro
1. Iyo yekudzvanya sisitimu inodzorwa ne PLC chirongwa, icho chinogona kuona otomatiki kurodha.
2. Iyo resin inotanga kuiswa mukati zvinoenderana nehuwandu hwemafomula yakatarwa nechirongwa, uye inomira zvoga kana huwandu hwefomula hwasvika, uye hwobva hwangomira kana iyo yakaderera shrinkage mumiriri yaiswa muyero yefomula.
3. Chiteshi cheresin feed, yakaderera shrinkage mumiririri feed chiteshi uye styrene feed chiteshi, iyo yekuzadza feed chiteshi yakachengeterwa pane Inokanganisa Keturu.
4. Iyo PLC inogona kuchengeta akawanda akasiyana SMC mapepa, ayo anogona kushandiswa nenhamba.
5. Inokanganisa keturu inogadzirwa nesimbi isingaite 201 yesimbi kuti igare.
6. Iyo resin inotakurwa ichishandiswa yakatumirwa kunze pombi yegiya kana pombi yekukwirisa ine kuyerera kwehuwandu hwe4-6 cubic metres paawa.
7. Zvese zviri zviviri Zvinokanganisa Keturu uye resin yekuchengetera tangi ine tembiricha sensors yekutarisa tembiricha yeiyo resin paste.
8. Iyo calcium carbonate feed inzira yekutsvaira inoburitsa nzira, uye nguva yekuchaja yega yega calcium carbonate ingangoita maminetsi gumi.
Yakazara otomatiki Kugadzira Line Kuvhenganisa Sisitimu Zvimiro
1. Yakagadzirwa nematatu matatu epamusoro viscosity gear pombi, masanganisi uye emagetsi ekudzivirira masisitimu
2. Iyo A, B, uye C pombi inotyairwa nema servo motors. Mumamiriro ekugadzira, iyo B uye C mapombi anoteedzera iyo A pombi kuti iite yakavharika-chiuno kudzora, uye vakagadzirwa neakawanda kuyerera kwemamita neyakajeka ezviuru zvitatu zvezviuru.
3. B, C pombi inouya nebuditsa dhiramu, iko kugona kuri 100 litita uye 50 litita
4. Pombi dzeB neB C dzose dzinotakurwa neUS Weiken gear metering pump. Iyo A pombi inoshandisa iyo Wicken giya pombi kana yekunze Screw pombi. Pombi dzeA, B, uye C dzakashongedzerwa nemafuta ekuyeresa ekuongorora kuyerera kweiyo resini yekunamatira magnesia peta uye pendi yemavara. Kana chimwe chezvinhu A, B, uye C chikakanganiswa, iyo online system inomira yega.
SMC Kugadzira Line
Plastiki firimu upamhi
Firimu Max. dhayamita
SMC Sheet upamhi
Resin namatidza viscosity
Fiber zvemukati 10% -40%
Zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
Washington City Offices muenzaniso
Nhamba yegirazi dzemagetsi
Set ne blade
Fiber akapararira yunifomu mudziyo
Kunyudza zone kumhanya
Kunyudza zone mesh bhandi upamhi
Kunyudza kureba kwenzvimbo
Ruvara & MgO Kurodha nzira
SMC-1200 Sheet Muchina
2000L Inokanganisa ketera (2 seti ye22KW mota uye maviri seti eanodzora)
22KW Yekumhanyisa Yekumhanyisa Disperser & 150L Kusanganisa Drum (isina simbi)
Yakakwira chaiyo kuyerera mita
Pashure: musuo nekusimbisa, nebefu muchina
Zvadaro: Otomatiki yekugadzira mutsara
Pombi yemagetsi pombi
USA VIKING / Furanzi PCM
Otomatiki Smc Prepreg Kugadzira Line
Otomatiki Smc Sheet Machine